အဘယ်အရာကိုမျှမော်ကွန်းတိုက် - Tele RELAY တစ်ခု
Foot OL – OL : L’OM est à découvert, Aulas ne lâche rien ! – Olympique Lyonnais –…
Incapable de battre Strasbourg à domicile dimanche (1-1), l’Olympique Lyonnaisafait une croix sur la deuxième place, actuellement occupée par Marseille. Et pour cause, l’OMadésormais 18 points de retard sur Lyon. Mais les Gones…
အိန္ဒိယ - ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ် ဦး ၏ဗဟုသုတကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါကဘာမှမထူးပါ။ SC | အိန္ဒိယသတင်း
နယူးဒေလီ - Chattisgarh တွင်အခြေစိုက်သောဆရာဝန်သုံး ဦး က၎င်းအားစစ်ဆေးမှုကိုခံယူရန်တာဝန်ရှိသည်ဟုပြောခဲ့သည်ကိုလာမည့်သောကြာနေ့တွင်တရားရုံးချုပ်ကပြောကြားခဲ့သည်။
Foot OL - OL: Govou သည် Garcia - Olympique တွင်ဘာမှနားမလည်ပါ - Caqueret မှထွက်ခွာသည်။
Photo Icon Sport တနင်္လာနေ့၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၃၀ ရက်၊ Lyonnais သည်အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကိုတနင်္ဂနွေနေ့တွင်ကျရောက်ခဲ့ပြီး၊
Tele RELAY တစ်ခု ဖေဖော်ဝါရီလ 2, 2020 0
နယူးဒေလီ - Air India ဒုတိယတိမ်းမှောက်ပျံသန်းမှုသည်အိန္ဒိယလူမျိုး ၃၂၃ ဦး နှင့်မော်လ်ဒိုက်နိုင်ငံသား ၇ ဦး ကိုတနင်္ဂနွေနေ့နံနက်ကဒေလီတွင် coronavirus ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှု၏ဗဟိုချက်သို့ပျံသန်းသည်။ လူနှစ် ဦး ကိုယူဆောင်လာသည့်လူ ဦး ရေ ...
Sarah Abitbol: "ငါတို့ဘာမှမမြင်ခဲ့ဘူး၊ ငါတို့မခံစားရဘူး" လို့ဖိလစ်ကိုပြောပြသည်။
Tele RELAY တစ်ခု ဖေဖော်ဝါရီလ 1, 2020 0
ရုပ်ပြစကိတ်စီးခြင်းချန်ပီယံဟောင်းဖြစ်သူ Sarah Abitbol ကသူမအားသင်တန်းပို့ချသူအား ၁၉၉၀ မှ ၁၉၉၂ ခုနှစ်အတွင်းမုဒိမ်းကျင့်ခဲ့သည်ဟုစွပ်စွဲခဲ့သည်။
[Tribune] အုပ်ချုပ်မှု - အရာရာတိုင်းကိုလုပ်ချင်တဲ့သူကဘာမှမလုပ်ဘူး - JeuneAfrique.com
Tele RELAY တစ်ခု ဇန်နဝါရီ 31, 2020 0
ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ကိုသင်ဘယ်လိုအသိအမှတ်ပြုသလဲ။ သင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုမည်သို့ကောင်းစွာဝန်းရံရမည်ကိုသိရန်လိုအပ်သော်လည်း ဦး စားပေးသတ်မှတ်ချက်များကိုသတ်မှတ်ရန်၊ သင်၏ ၀ န်ထမ်းများအားပုံမှန်အကဲဖြတ်မှုအောက်တွင်မည်သို့နေရာချထားရမည်ကို ... သေချာရန်လိုအပ်သည်။
အဘယ်သူမျှမ, coronavirus ဘီယာနှင့်မဆိုင်ပါဘူး - BGR
Tele RELAY တစ်ခု ဇန်နဝါရီ 29, 2020 0
တရုတ်နိုင်ငံမှကြောက်စရာကောင်းသော coronavirus ဗိုင်းရပ်စ်အသစ်နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းများကြောင့်နေ့စဉ်သတင်းသံသရာမှသင်လုံးဝလွဲချော်ရမည်။ သို့သော်လူတိုင်းရပ်။ မဖတ်တတ်ကြပါ။
ဗဟိုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံ - FrançoisBozizé၏အဆိုအရသူ့ကိုသမ္မတလောင်းအဖြစ်အဘယ်အရာကမျှတားဆီးထားခြင်းမရှိပါ…
Tele RELAY တစ်ခု ဇန်နဝါရီ 28, 2020 0
ဗဟိုအာဖရိကသမ္မတဟောင်းFrançoisBozizéကဘန်ဂူနီသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိချိန် မှစ၍ စာနယ်ဇင်းများနှင့်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံစဉ် ၂၀၂၀ တွင်သမ္မတလောင်းအဖြစ်အဘယ်အရာကမျှတားဆီးနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းတနင်္လာနေ့ကပြောကြားခဲ့သည်။
Football Ligue 1 - L1: Transfer အပြောင်းအလဲကဘာမှမစည်းပါဘူး။ Dugarry သည် OL ကိုဥပမာအနေနှင့်ယူသည်။
Tele RELAY တစ်ခု ဇန်နဝါရီ 27, 2020 0
လာမည့်နွေရာသီတွင် Ligue 1 သည်ရုပ်မြင်သံကြားဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများနှင့်ဤ Mediapro ဈေးကွက်သို့ရောက်ရှိလာခြင်းကြောင့်ယူရိုတစ်ဘီလီယံကျော်ကိုအမှန်တကယ်ပိုင်ဆိုင်လိမ့်မည်။ ရုပ်မြင်သံကြားအခွင့်အရေးများမြင့်တက်လာခြင်းသည်အပြောင်းအရွှေ့ ၀ င်းဒိုးအပေါ်တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိသည်။
Vanessa Paradis၊ အားနည်းနေသောအိမ်ထောင်ရေး၊ Johnny Depp သည်ဘယ်တော့မှအရှုံးမပေး၊ သူ၏ဝန်ခံချက် - ဗီဒီယို
Tele RELAY တစ်ခု ဇန်နဝါရီ 25, 2020 0
Vanessa Paradis၊ အားနည်းနေသောအိမ်ထောင်ရေး၊ Johnny Depp သည်ဘယ်တော့မှအရှုံးမပေး၊ သူ၏ဝန်ခံချက် ------------------------------------ ------- ဗီဒီယိုကြည့်သည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဤဗီဒီယိုသည် https://www.youtube.com/watch?v=O_l4WRB7LSA တွင်ပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
123 လာမယ့်